Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Argentine Emi Buendia Childhood Story Plus Untold Biography Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kacha mara amara "Buendia". Anyị Emi Buendia Childhood Akụkọ gbakwunyere akụkọ banyere Untold Biography Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na mgbe ọ bụ nwata ruo ụbọchị.
Ndụ na ịrị elu nke Emi Buendia.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ikike ya iji mepụta ohere ma ọ bụ mee karịa karịa-nke atọ. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle Emi Buendia's Biography nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Emi Buendia Childhood Story - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Emiliano Buendía Stati Amụrụ na 25th ụbọchị nke December 1996 n'obodo Mar del Plata na ndịda ọwụwa anyanwụ nke Buenos Aires, Argentina. Amuru ya na nne ya, Karina na nna ya, Eduardo.
Emi Buendia nne na nna Karina na Eduardo.
Ekele m mụrụ na Argentina - mba ama ama maka ịmịpụta ndị ịgba ama dị ka Maradona na Messi - Buendía na - egosipụta dị ka onye Argentine nke agbụrụ ọcha nwere mgbọrọgwụ South America.
A zụlitere ya n'obodo ya - Mar del Plata ebe o toro na ụmụnne nwoke abụọ ndị tọrọ - Augustin na Joaquin.
Foto nwata bụ Emi Buendia (n'aka ekpe) ya na nwanne ya nwoke nke Augustin toro n'obodo ya.
Na-etolite na Mar del Plata, Buendia bụ obere nwa nwoke nke na-enweghị mgbagha karịa karịa ụmụaka ndị ọzọ mana ụmụnne ya.
N'agbanyeghị nke ahụ, ọ na-eche banyere football karịa ihe ọ bụla ọzọ ma nwee atụmatụ dịka ọsọ na ume nke na-ekwu okwu ọma banyere ọdịnihu ya na egwuregwu ahụ.
Emi Buendia Biography - Nkụzi na Ọrụ Buildup:
Ka ọ na-erule oge Buendía dị afọ 5, ọ malitere ịkụ bọl maka klọb nke Cadetes de San Martín, ihe omume ọ gwakọtara na ịmụ akwụkwọ na Peralta Ramos Institute na obodo ya Mar Mar Pla Plata.
Emi Buendia malitere ọrụ ya na nwata nwoke Cadetes de San Martín.
Mgbe ọ nọ na Cadetes de San Martín, Buendia nọrọ afọ isii nke ndụ ya na-egwu obere egwuregwu ime ụlọ.
Ikike nke prodigy nke gosipụtara ikike ọrụ nka na ọgụgụ isi na-enweghị atụ karịa afọ ya na nha dị obere mere ka ọ bụrụ onye mba Argentina ọzọ - Juan Esnáider onye tụrụ aro ka ọ gaa n'ihu na-arụ ọrụ egwuregwu na Real Madrid Academy.
Emi Buendia Bio - Ndụ Ndụ Mmalite:
Ọ bụ ezie na Buendia dị afọ 11 mgbe ọ rutere Real Madrid, ọ ka dị sentimita ole na ole n'akụkụ ahịhịa nke ahịhịa artificial nke ọ na-agba mbọ iji gosipụta uru ọ bara.
Emi Buendia rutere Real Madrid Academy dị ka obere nwatakịrị dị afọ 11 na 2008.
Mbido mmepe anụ ahụ Buendia tinyere enweghị ike ijide ọsọ ọsọ ọsọ nke ndị bịara abịa mechara mee ka ọ pụọ na klọb afọ abụọ mgbe nke ahụ gasịrị.
N'ụzọ dị mma, Getafe bịakwutere ya nke bịanyere aka na ya ụbọchị mgbe ọ hapụsịrị Real Madrid.
Emi Buendia Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Nwatakịrị ahụ egbughị oge iji biri na Getafe ebe o bilitere n'ọkwá dị elu na nka tupu ya enweta otu n'ime ndị otu klọb ahụ mgbe ọ dị afọ 17.
Ọrụ ya pụtara ka ọ na-aga n'ihu na-aga n'ihu ruo oge 2015/16 hụrụ na Getafe na-ata ahụhụ na LaLiga.
N'oge na-adịghị anya mbupute Getafe kpara nkata na mmerụ ahụ mere ka Buendia kwụsịtụ.
Ka ọ na-erule oge Getafe mechara mee ka ọpụpụ ya, enwere ike ịhụ Buendia ka ọ na-arụ ọrụ na bench n'ihi mmerụ ahụ nkwonkwo ụkwụ.
Mbuli Emi Buendia na Getafe nwere mbibi na mmerụ ahụ.
Emi Buendia Biography - Bilie Iji Ma Ama Akụkọ:
Emechara Buendia zuru ezu na klọb Cultural Leonesa nke abụọ na July 2017 iji gbapụta onwe ya.
Mbugharị ahụ were ntụgharị a na-atụghị anya ya wee bụrụ ihe mkpalite maka ihe ịga nke ọma Buendia ebe ọ gara nke ọma na ịwakpo etiti.
Ka ọ na-erule ngwụsị oge ahụ, Buendia nwere ihe mere ọ ga-eji mụmụọ ọnụ ọchị ọzọ ka ọ na-achọta onye ọkpụkpọ Leonesa nke onyinye oge ahụ!
Emi Buendia bụ onye egwu Cultural Leonesa nke oge 2017-2018.
Norwich bịara na-akpọ Buendia bụ onye dabara adaba maka atụmatụ ha ịlaghachi na Premier League.
Mgbe ọ bịanyere aka na nkwekọrịta afọ anọ ya na ndị a kpọbatara n'oge ahụ, Buendia rụzuru ihe ndị a tụrụ anya ya ka o meriri ngụkọta nke ihe mgbaru ọsọ 8 na English Football League (EFL) iji nyere Norwich aka ịkwalite Premier League.
Ọganihu ngwa ngwa rue oge Buendia eguzobela onwe ya dị ka onye egwuregwu bọọlụ Premiya na Norwich ebe a na-atụ anya na ọ ga-aga n'ihu na-egwu bọọlụ elu-elu rue 2024.
Emi Buendia bịanyere aka na nkwekọrịta ọhụụ ya na Norwich City na ọnwa Julaị 2019.
Nwunye Emi Buendia - Claudia:
O siri ike igosipụta otu ọnọdụ ndụ mmekọrịta Buendia n'oge edere.
Ka o sina dị, ọ nọ ebe dị n'etiti mkpakọrịta nwoke na nwanyị na ịlụ di na nwunye. Nwanyị nọ na foto ịhụnanya Buendia gosipụtara aha Claudia.
Emi Buendia na enyi ya nwanyị ma ọ bụ wag Claudia. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Ọ bụ ezie na ejighị n'aka ma Buendia nwere ọmarịcha akụkọ ihe mere eme ya na ụmụ nwanyị ndị ọzọ tupu ha ezute Claudia, anyị ji n'aka na lovebirds na-anọkọ ọnụ tupu 2018 ma nwee nwa nwoke a na-akpọ Thiago.
Emi Buendia na nwunye ya na nwa ya nwoke Thiago. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Ndụ Buendia Ezinụlọ:
Emi Buendia sitere na ezinụlọ nwere obi ụtọ na nke etiti. Lee nkọwa gbasara ndụ ezinụlọ ya.
Banyere Emi Buendia Nna:
Eduardo bụ nna Buendia. Dị ka nne na nna na-akwado bọọlụ, ọ hụrụ ọdịmma Buendía n'oge ọrụ ya na Madrid na usoro ndị ntorobịa nke Getafe site na ị na-eleta onye ọgụgụ isi ọfụma ọbụlagodi mgbe stats kwuru okwu megide ihu ọma ndị ịgba ọsọ.
Njikọ dị n'etiti nna nke atọ na Buendia na-aga n'ihu na-esikwu ike ka onye na-eme ihe ike na-eme ihe ike adịghị echegharị na-eme ka ezinụlọ ya nwee nganga ma ọ bụ na ọpụpụ egwuregwu.
Banyere Emi Buendia nne:
Carina bu Buendia nne ma o dokwara anya na o bu nwanyi mechara obi Buendía.
Karịsịa, ọ bụ onye na-elekọta akụkọ banyere àjà nke ezinụlọ mere iji hụ na nrọ Buendia nke ịgba bọl na-aga nke ọma ghọrọ ihe ịga nke ọma.
Ọ na-ekere òkè n'ezinụlọ ọhụụ site na ịpụta na foto nke na-ewepụta Buendia iji soro ezinụlọ nọrọ ezigbo oge yana were selfies na ya mgbe ha na-apụ.
Banyere ụmụ nwanne nwanne Bu Budia:
Buendia nwere ụmụnne abụọ akpọrọ Augustin na Joaquin. Duo anaghị ebi n'okpuru ndò Buendia kama ọ na-eme nke ọma n'ụzọ ọrụ na ọdịmma nke aka ha.
Ha na Buendia na-emekọ ihe mgbe ọ bụla ọ nọ ezumike ma nyere ya aka icheta ahụmịhe oge ochie ha nwere dị ka ụmụaka.
Emi Buendia ya na nne na nna ya na umunne ya abuo.Ibele Ego: Instagram.
Banyere ndị ikwu Bu Budia:
Banyere osisi ezinụlọ Buendia buru ibu, nne na nna ya na nne nne ya bụ otu n'ime ihe omimi ekpughere bọọlụ ebe enweghị ndekọ ọ bụla banyere ndị nne na nna ya, nwanne nne ya, ụmụ nwanne ya na ụmụ nwanne ya.
N'otu aka ahụ, ụmụ nwanne nne Buendía amatabeghị ihe ndị ama ama na ndụ ya wee rue ugbu a.
Emi Buendia Ndụ Nke Onwe:
Buendía nwere odimma-egwu na-enweghị atụ nke na-emesịa mee ka ọ nwee ụdị mmadụ pụrụ iche. Na mgbakwunye, ọ gosipụtara Aquarius zodiac àgwà nke ịbụ ndị nyocha na ime ihe lekwasịrị anya.
Apụghị igwu egwuregwu asọmpi na ịga ọzụzụ, Buendía nwere mmasị na ntụrụndụ ole na ole gụnyere ikiri ihe nkiri, ige egwu, igwu mmiri na igwu tenis.
Emi Buendia na-egwu Paddle Tennis dị ka ihe omume oge ọrụ. Ebe E Si Nweta Foto: Instagram.
Web Site Ndụ Emi Buendia:
Na-ekwu maka otu Buendia si na-emefu ma na-emefu ego ya, nchịkọta nke akụ ya na-anata ego sitere na ụgwọ ọ na-enweta maka ịgba bọọlụ nọ n'isi elu ebe ndị ọzọ mejuputara akụ na ụba ya na-enweta site n'aka ụdị nkwado dị ka Nike.
N'agbanyeghi na nyocha nke usoro mmefu Buendia banyere inweta akụ dịka ụgbọ ala na ụlọ ka ana-enyocha, ọ na-eti ndị fans dịka onye na-ebi ndụ okomoko site na iwepụta oge dị mma na saịtị ezumike mara mma gburugburu ụwa.
Emi Buendia na-ekpori ndụ ezumike ya na osimiri dị na Miami.
Emi Buendia Eziokwu Eziokwu:
Tupu anyị akpọọ ya ihe mkpuchi na Emi Buendía's nwata akụkọ gbakwunyere akụkọ ndụ ya biko chọta n'okpuru ụfọdụ amachaghị ma ọ bụ ọtụtụ akụkọ nwere ike inyere gị aka ịmatakwu ya nke ọma.
IKPE: E kwuputaghị na onye na-agba bọọlụ na-ekwupụta okwu nke nwere ike ịgafe maka isiokwu nke okwukwe, ahụbeghịkwa ya ka ọ na-ekele onye dị elu ka ọ na-egwu bọl. Kaosiladị, nsogbu ahụ dị ya mma ịbụ Onye Kraịst.
Mgbakọ: Mba: Buendia malitere ọrụ ịgba bọl ụwa ya site na ịnọchi anya Spain dị ka onye ntorobịa tupu ọ gbanwee ntụkwasị obi maka igwu egwu maka mba nke Argentina.
Emi Buendia na-egwuri egwu maka otu egwuregwu U20 nke Argentina na 2015. Ebe E Si Nweta Foto: AlongComeNorwich.
TATTOO: O nweghi otu egbugbu n’ahu ya ma tie otutu mmadu dika onye nwere ike idobe akpukpo aru n’enweghi oru oma n’aru oru ya.
Oụ sịga na mmanya INke a nwere ike ịdịrị Buendía mfe ịkwụsị inye ndị enyemaka aka karịa ịhụ ụzọ na-a smokingụ sịga ma ọ bụ na-a drinkingụ mmanya.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Emi Buendia Childhood Akụkọ tinyere Eziokwu Untold Biography. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kekọrịta anyị site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Ọ bụ nnukwu mmadụ site na ezinaụlọ nwere obi umeala, na-ahụ n'anya. Ọ bụ nnukwu onye ọkpụkpọ rugby. ezinụlọ ya niile sitere na rugby.